RW Abiy Ahmed Oromona mahayo Axmaarona ka Guurtay"WQ Faisal Rooble. - Ogaden24 | Ogaden24
May 3, 2021 - Comments off
Sadex sano ka hor ayey ahayd markii RW Abiy laga wada daba dhacay. Qaar Axmarada maylka adag ka mid ah ayaa sujuudii ay Xayle Selaase siin jireen mid la mid ah RW Abiy siiyey.
Markuu Mareykanka booqash ku yimid (2019) qaar Axmaaro ah ayaa lugaha ka dhunkaday. Xataa Muslimiin ayaa u sujuuday. Soomaalida Dawlad Deegaankuna waxay in yar u jirsadeen in ay ku tilmaamaan “rasuul.” Qaar ayaa qadiyada Soomaaliyeed ka xoojiyey xurmada ay u qaadeen RW Abiy.
Waxyse hilmaameen in uu RW Abiy yahay Baadari. Anigu shaqsiyan waxaan ka booday isaga oon sadex (3) bilood dhamaysan. June 2018 ayaan wareysi siiyey BBC aniga oo Kenya fasax ku maraya. Waxaan xiligaas tibaaxay in aanu Abiy humaag lahayn, laakiinse uu yahay shaqsi baadari ah oo wax kasta ka eega dhinaca caqiidada MASIIXIGA.
Arintaas had waa la wada arkay. Qudbadihiisa waxa uu ku furaa kuna gunaanadaa MASIIXINIMO. Dadka ku wareegsani oo ah gudiday amiga Itoobiya (Security Council) waa Masiixiyiinta mayalka adag.
RW Abiy waxa uu hilmaamey 110 milyoon ee Itoobiya ku hoos jiraa in aanay ka codsan in uu MASIIXINIMO dadka ku wacdiyo. Waxa laga filaayey in uu xal u keeno dadkan Axmaaradu 150 sanadood iyo in ka badanba guumeysanaysay.
Meeshuu xaquudad umadaha kala duwan xaqiijin lahaa ayuu isku dayey in uu dib Axmaaro ugu gumeeyo dad xuquuqdooda ilaa la soo noqda.
Axmaaro qanci oo kuwa kale ee badan quus bad ayuu door biday. Axmaaro sadex hadaf oo isku lifaaqan ayey leedahay: 1) In ay soo celiso gumeysigii ay qowmiyadaha kala duwan ku haysay; 2) In dhul balaadhsi ka sameeyaan Oromo, Tigre, iyo Beneshangul-Gumuz; iyo 3) in aay dhuuxa dhaqaale ka nuugaan gobolada kale sida kan Soomaalida oy hadaba dheef weyn ku qabaan.
Waxyaabo badan RW Abiy Axmaaro wuu u ogolaaday. In uu dib u soo nooleeyo taariikhdii gumeysiga Axmaarada ilaa xad wuu soo celiyey; in ay Tigre ka soo arr gutaan wuu u yeelay; in dhul-boob ku sameeyaan Tigre iyo Benishangul-Gumuz iyana way dhacday.
Waxse ay Axmaaro kaweyday RW Abiy wa arintii ugu muhiimsanay oo ahayd in uu gidi ahaanba ka takhaluso FEDERAALKA ku dhisan QOOWMIYADAHA (Federal system based on Peoples, Nations, and Nationalities). Halkaasay ka timid qaniinyada Axmaaradu.
Qaniinyada Oromoda ayaa ka sii daran: halgankii ay islahaayeen waan ku guulaysateen ayuu ka biciidiyey. Guushii ayuu Axmaaro gacanta u galiyey; Siyaasiyiintoodii ayuu jeelasha u taxaabay; gu dambeyna jabhadii uu soo xero galiyey ee OLF ahayd ayuu hadana argagixisu ku tilmaamey.
Maatan, Axmaaro ma hayo. Mudaahardyadii ay usbuucyadan dhigeen waxay ku dhawaaqayeen hal-ku- dhagyo ah” Abiy waa OLF-SHANE iyo ABIY WAA ARGAGIXISO!” Oromona ma hayo; waxay RW abiy u aragta ‘GABAN RABA IN UU SOO CELIYO MENILIK!” Xataa Soomaalida aamusani tol iyo tag ayuun bay la’dahaye biyo u may kabadeen saa waxay u jeedaan godka uu ku sii wado.
Iskusoo wada duuduub, RW Abiy Amxaro meel cidlo ah ayey kaga dhaqaaday. Oromona Abley ayey u lisannaysaa. Ilayn waa lax dhukani abaar ma’oge, Isna jartiinooyin iyo beero lagu jimicsado ayuu dhisayaa. Fakirka aha Axmaaro soo dhoweyso qowmiyadaha badana wada dayri oo weliba Itoobiya sii xukun waxay la mid tahay: “ISLAANTII AWRKA CIRKA ARAGTEE, KEDII JARKA KA TUURTAYA!”